vitamino been ah
Ressi Medri (Eritrea), 2 Feb 2015 (Alldhooftinle.com)
Waa in layska ilaaliyaa dawooyinka vitaminada ah ee lagu iibiyo waddanka Mareykanka .
Dawooyinka Vitaminka ah ee lagu sameeyo Maraykanka ayaa la ogaaday inay yihiin faaliso aan ahayn waxa dusha lagaga qoray. Xeer ilaayaha New York Eric Schneidermen ayaa sheegay in baadhitaan ka dib ay ogaadeen in dawooyinka lagu sheegay Vitamins ama herbal supplements (dawooyin laga heleyayo waxa jidhkaaga u baahan yahay) ay been wada yihiin kulligood, 4% mahee.
Shirkadaha soo saara fiitamiidana ayaan loo baadhin sida adag ee loo baadho dawooyinka kale laga soo bilaabo 1994kii, markaas oo senetor Orin Hatch oo laga soo doorto gobolka Utah xidhiidh badana la leh shirkadaha vitaminka soo saaraa uu ku guuleystey in dawooyinkaa laga dhaafo sharciyada adag ee lagu xakameeynayo dawooyinka noocyadaa ah.<
Dukaamada waaweyn ee dawooyinkaa iibsha sida Walmart, GNC, Walgreens iyo Target ayaa sheegay inay dowlada kala shaqayn doonaan sidii looga hor tegi lahaa shirkadaha tuugta ah ee daawo beenaadka soo saara. Waxaase wax lala yaabo ah, markii baadhitaanku soo saaray waxa dawooyinkaa ku jira inay yihiin bariis, daqiiq, digir iyo dabacase. Iyadoo weliba qaybtood ay qudhmeen oo xanuuno laga qaadi karo.<
Waxaan uga digaynaa dadweynaha inaanay isticmaalin dawooyinkan oo lagu sheegay inay caafimaadka qofka khatar gelinayaan oo ay weliba dad u dhinteen xanuuno ay keeneen dawooyinkaasi. Dukaamo badan ayaa sheegay inay ka qaadi doonaan merfeshkooda ama joojin doonaan iibka dawooyinkan, war jiraa se Cakaaruu iman.